ကစားတဲ့အဘယ်သူမျှမအပ်ငွေလိုအပ်ပါသည်အပိုဆု | Luck ကာစီနို
နေအိမ် » ကစားတဲ့အဘယ်သူမျှမအပ်ငွေလိုအပ်ပါသည်အပိုဆု | Luck ကာစီနို
Luck ကာစီနိုမှာကစားတဲ့အဘယ်သူမျှမအပ်ငွေလိုအပ်ပါသည်အပိုဆု : အဆိုပါလူမှုဂိမ်းကစားသူများ '' မွေ့လျော်ခြင်း – £5အခမဲ့အပိုဆု Get
ကစားတဲ့အချိန်ကတည်းကရှေးပဝေနီးပါးတိုင်းလောင်းကစားရုံကစားသမားအကြားတစ်ဦးအနှစ်သက်ဆုံးခဲ့. အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံနှင့်အတူ, သော်လည်း, ကစားတဲ့လုံးဝလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအကောင်အထည်ဖော်မည်ဟုဆိုသည်ယူဆခဲ့သည်. အွန်လိုင်းကစားတဲ့၏ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ဗားရှင်းအသက်ရှင်သောသူတို့၏ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်အရှိန်အဟုန်မှာပြောင်းရွေ့နေစဉ်, ဤအတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှကစားတဲ့ဂိမ်းတွေသင်အံ့သြဖွယ်ဂိမ်းအတှေ့အကွုံပေးရမယ့်ထူးခြားတဲ့လမ်းဖွဲ့စည်းပုံမှာနေကြတယ်. ကစားတဲ့မရှိသိုက်လိုအပ်ဆုကြေးငွေမှာအသစ်ကစားသမားများအတွက်သီးသန့်ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖြစ်ပါသည် Luck လောင်းကစားရုံ.
Luck ကာစီနိုမှာကစားတဲ့အဘယ်သူမျှမအပ်ငွေလိုအပ်ပါသည်အပိုဆု, Beginners မ​​ျားအတွက်တစ်ဦးကရယူထားသော – အခုတော့ Join
ကစားတဲ့ယူထားသောကြောင့်လူကြိုက်များဝေစုနှင့်အတူအရှိန်အဟုန်စောင့်ရှောက်ရန်, အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံတိုးသူတို့ရဲ့ကစားတဲ့ပတ်ပတ်လည်ကသူတို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲကနေပွိုရာပူဇော်သက္ကာကိုအောင်ကမ်းလှမ်းမှုနှင့်အတူထွက်လာကြ. အွန်လိုင်းကစားတဲ့ကစားသမား၏လမ်းလာသောအကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုမှာ Luck ကာစီနိုမှာ "ကစားတဲ့အဘယ်သူမျှမအပ်ငွေလိုအပ်ပါသည်အပိုဆု" ဖြစ်ပါတယ်.
ဒီကစားတဲ့အဘယ်သူမျှမအပ်ငွေအပိုဆုကစားသမားရုံ Luck လောင်းကစားရုံနှင့်အတူဆိုင်းအပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုနှင့်သူတို့၏အဆုံးမှလိုအပ်သောအဘယ်သူမျှမသိုက်နှင့်အတူသူတို့အကြိုက်ဆုံးကစားတဲ့ဂိမ်းနှင့်အတူစတင်ရန်ကြိုဆိုဆုကြေးငွေရရှိစေတဲ့ထူးခြားတဲ့အဆိုပြုနှင့်အတူကြွလာ!
အသီးအသီးတိုင်းပြည်သို့မဟုတ်ပထဝီခုနှစ်တွင်, အကစားတဲ့ဂိမ်းကစားထိုဂန္ဂိမ်းတစ်ခုလတ်ဆတ်တဲ့မူကွဲတစ်ခုတစေ့တစောင်းရ. ပြဇာတ်သစ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကနေပရိုမိုးရှင်းနှင့်ဆုကြေးငွေမှ, ဤ ကစားတဲ့ဂိမ်းတွေ အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ကှာခွား. တကယ်တော့, ကိုပင် ကစားတဲ့မရှိသိုက်လိုအပ်ဆုကြေးငွေ ဤသူပထဝီမျိုးကွဲအကြားကွဲပြားခြားနားသည်!
ဗြိတိန်နိုင်ငံ & အိုင်ယာလန်
ယူအက်​​စ်အေ & ကနေဒါ
ကစားတဲ့့ဗြိတိန်၌ရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာဂိမ်းဒါပေမဲ့အလွန်ဘုံလောင်းကစားရုံဂိမ်းဆည်းကပ်သည်မဟုတ်. ဗြိတိန်နိုင်ငံအတွက်အသုံးအများဆုံးကစားတဲ့ဂိမ်းဖြစ်ဖြစ်ပျက်, ဒါပေမဲ့သိသာ, တစ်ခုတည်းသောသုညကစားတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ကစားတဲ့နှင့်အတူဥရောပကစားတဲ့ဂိမ်းမူကွဲနှင့်အတူ coupled မရှိသိုက်လိုအပ်ဆုကြေးငွေ 2.70% အိမ်သူအိမ်သားအစွန်း. ဤသည်ကိုရှင်းလင်းစွာသင်ငွေသား depositing မရှိဘဲဤမူကွဲကစားရသေးအိမ်မှာကြီးမားတဲ့ကျေးဇူးယူပြီး၏မြင့်မားသောဖြစ်နိုင်ခြေရှိရနိုငျကွောငျးဆိုလို!
သငျသညျကိုအမေရိကန်တွင်အွန်လိုင်းကစားတဲ့တစ်ဂိမ်းကစားနေတယ်ဆိုရင်, သို့ဖြစ်. သင်တို့သည်ဧကန်အမှန်အညီလူအပေါင်းတို့သည်ဆုကြေးငွေများနှင့်အခြားပရိုမိုးရှင်းတွေနဲ့ဂိမ်းရဲ့အမေရိကန်ကစားတဲ့မူကွဲနှင့်အတူ. ဒါကြောင့်ဒီမှာဖော်ပြထားလိုအပ်ပါတယ်သော်လည်း, ဒီမူကွဲသောကွောငျ့သိသိသာသာအိမ်တော်ကိုအစွန်းပေါ်ပေါက်ကြောင်း၎င်း၏အပိုနှစ်ဆသုညဘောလုံးကိုကောင်းစွာ၏အစဉ်မပြတ်ဂိမ်းကစားသူတို့တွင်တစ်ဦးအလွန်လူကြိုက်များတယောက်မဟုတ်ကြောင်း (တစ်ပုံကြီးချဲ့မှတက် 5.26%).
ဥရောပလောင်းကစားရုံစျေးကွက်၏ထွက်လာတဲ့ကစားတဲ့ဂိမ်းအပေါ် fixated အကစားတဲ့မထင်မှတ်သောအဘို့, ကိုယ့်ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားအစွန်းနှင့်အတူကစားတဲ့ဂိမ်းမူကွဲ - အကစားတဲ့မှတပါးတစ်ဦးကဆက်ပြောသည်အကျိုးရှိမရှိသိုက်လိုအပ်ဆုကြေးငွေရှိပါတယ် 1.35% သို့မဟုတ်မေတ္တာနဲ့ပြင်သစ်ကစားတဲ့အဖြစ်ကိုအဘယ်သို့ရညျညှနျးဖြစ်ပါတယ်.
အဆိုပါ ပြင်သစ်ကစားတဲ့ နှစ်ဦးလူကြိုက်များမျိုးကွဲနှင့်အတူကြွလာ, ၏တူညီသောအိမျတျောကိုအစွန်းနှင့်အတူသော်လည်း 1.35%. ပြင်သစ်ကစားတဲ့မှာအနိမ့်အိမျတျောကိုအစွန်းကစားအုပ်ချုပ်ဖို့ attribute ဖြစ်ပါတယ်, တစ်သုညလှည့်ဖျားနှင့်အတူဝင်သွားပါသည်ကြောင်း. သင့်အနေဖြင့်လောင်းကစား layout ကိုအပေါ်မျိုးစုံကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အားမရနှင့်သူတို့အားစီမံခန့်ခွဲရန်အပင်ပိုက်ဆံပေးဆောင်အပေါ်ထားရှိကြသည်တစ်ချိန်က option ကိုရှိသည်နှင့်တစ်ဦးသုညသင်လက်မှာ options နှစ်ခုရှိ spins:
အဆိုပါစီမံခန့်ခွဲရန်အဖြစ်ကောင်းစွာလာမည့်လှည့်ဖျားများအတွက်ကစားတဲ့လောင်းကစား layout ကိုမှာထားနေဖို့
ကစားတဲ့ဂိမ်းရုံ "မသိုက်လိုအပ်" ဆုကြေးငွေမှကန့်သတ်ကြသည်မဟုတ်. တကယ်ပါပဲ, သူတို့ရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုများထဲမှတစ်ခုအနိမ့်လောင်းကြေးသူတို့ရဲ့ features တွေအတွက်အိပ်လွယ်ကူကိုအနိုင်ပေးသူတို့၏အကြီးမြတ်ဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ. သော်လည်း, နေပါစေသင်နှင့်အတူရှေ့ဆက်ဖို့လိုချင်တာတွေဂိမ်းမူကွဲ, ကစားတဲ့တစ်ဂိမ်းအကြောင်းကိုစုဆောင်းရန်တာမရှိ; ဂိမ်းကစားသည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကိုမျှော်လင့်ရန်ကျိန်းသေဘို့ဘယ်လိုမှာပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ရှု!
ကစားတဲ့ဂိမ်းတွေလုံးဝကျပန်းများမှာ: ဟုတ်ကဲ့! သူတို့ရဲ့ဂိမ်းလိုင်စင်အခြေအနေများအတွက်အရပ်အဖြစ်, သငျသညျကစားတဲ့တစ်ဂိမ်းကစားတစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်, တဦးတည်းအရာ၏ယုံကြည်မှုဖြစ် – တစ်တရားမျှတပြီးကျပန်းဂိမ်း.
ဒါကြောင့်အနိမ့် playthrough အခြေအနေများနှင့်အတူဆောင်တတ်၏စရာအရပျ၌အနိမ့်ဆုံးအလောင်းအစားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုနိမ့်ဆုံးငွေသားထုတ်ကမ်းလှမ်းသို့မဟုတ်ရှိကြောင်းကစားတဲ့တစ်ဂိမ်းကိုရွေးချယ်ပါ. နိမ့်ဆုံးရှယ်ယာအဆင့်တစ်လောင်းကစားရုံဆိုက်ကနေအခြားမှကွဲပြားခြားနား. သို့သော်, ထုံးစံအအစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲရန်အကြားရှိပါတယ် 0.01 နှင့် 1.00. တစျခုမှာမြင့်မားသောအိမျကိုအနားနှင့်အတူလာကစားတဲ့ဂိမ်းမျိုးကွဲကိုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်
အွန်လိုင်းကစားတဲ့သင် play စဉ်ပေါ်ပေါက်ဖို့လိမ်မဆိုပုံစံကိုဖျောင်းဖျကဖယ်ရှားရာမှာ software features တွေနှင့်အတူလုံး​​ဝလိမ်လည်မှု-အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်.
အနိမ့်ဆုံးအိမ်သူအိမ်သားအစွန်း option နဲ့အတူပြင်သစ်ကစားတဲ့ဝေးသဖြင့်ဤအ parameters မ​​ျားကိုအများဆုံးဆန့်ကျင်နေတဲ့ဆုရှင်ဖြစ်ပါတယ်!
ခြုံကြည့်သော်, ကစားတဲ့သင်သည်သင်၏အိမ်ရဲ့ဇိမ်ခံမှကစားခြင်းနှင့်သေးအခြားအွန်လိုင်းကစားသမားများနှင့်လောင်းကစားရုံများအကြားအပြန်အလှန်ခွင့်ပြုကြောင်းဖယ်ရှားရာမှာချက်တင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူသူတို့၏မြေ-based counterparts တွေကိုအတူပါလာသောလူမှုရေးရှုထောင့်ခံစား၏အကျိုးအတွက်ကမ်းလှမ်းတိုက်ရိုက် "မသိုက်လိုအပ်ဆုကြေးငွေ" ဝန်ထမ်းများအဖြစ်ကောင်းစွာ!
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ get ကစားတဲ့ဘီး အန့်အသတ်ပျော်စရာခရီးကိုလှိမ့နှင့်ပူးပေါင်း, NOW က!